ျမန္မာ ယူနီကုတ္ Myanmar3 Unicode Installation Methods and unicode exception!! ~ mgkhainghtoo
ျမန္မာ ယူနီကုတ္ Myanmar3 Unicode Installation Methods and unicode exception!!
22:48 ေမာင္ခိုင္ထူး No comments
ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ တိုးတက္မႈေတြ တစ္ခုျပီးတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာတာဟာ က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ
အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္..၊ အဲဒိအတြက္ ေခတ္ေနာက္က် မက်န္ခဲ႔ေစဖို႕ က်ေနာ္တို႕ေတြ
စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာေနၾကရပါျပီ... .။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာအိုင္တီအသင္း၀င္မ်ား အတြက္လည္း
ေနာက္မက်ေစရေလေအာင္ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္ေလးကို ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။ ..
လက္ရွိက်ေနာ္တို႕ ကြန္ျပဴတာေတြမွာ ျမန္မာစာကို တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳနိုင္ဖို႕အတြက္ Myanmar NLP(Myanmar Natural Language Processing) ၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ဧရာ ၊ သံလြင္ ၊ My Myanmar၊ ပိေတာက္ ၊ ပုရပိုဒ္ စတဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားက ျမန္မာေဖာင့္ေတြကို ယူနီကုဒ္ရဲ႕ စံခ်ိန္ စံညႊန္းမွီျဖစ္ဖို႕ ၾကိဳးပမ္းခဲ႔ၾကပါတယ္..(လက္တေလာမွာေတာ့ အသံုးမ်ားတာက ေဇာ္ဂ်ီေပါ့.)၊ အဲလိုၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကရာမွ တစ္စတစ္စ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ႔ျပီး ယခုဆိုလွ်င္ Myanmar NLP မွ ယူနီကုဒ္ ၅.၂ စံစနစ္ကို လိုက္နာတဲ႔ Myanmar3 ဆိုျပီးထြက္ရွိလို႕လာခဲ႔ပါျပီ.. ဒါေပမယ့္ အရိုးစြဲေနျပီးသား ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္ကေန မေျပာင္းလဲခ်င္တာေၾကာင့္ ယူနီကုဒ္အစစ္ ကိုသံုးဖို႕လက္တြန္႕ ေနၾကတာေတြရွိပါတယ္.။ အဲဒိအတြက္လည္း ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္အတိုင္း အသံုးျပဳလုိ႕ရေအာင္ဖန္တီးေပးထား ၾကပါတယ္.. ေနာက္မွ သူ႕မူရင္းလက္ကြက္အတိုင္း ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရိုက္ၾကည့္နိုင္ၾကမွာပါ..။ မူရင္းလက္ကြက္ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီ၀မ္းမွာ Tide key နဲ႔တြဲသံုးတဲ႔ အကၡရာမ်ိဳးေတြ (ဤ ၊ ၌ ၊ ၍ ၊ႆ၊ ပါဌ္ဆင့္ မ်ား ၊ စသည္မ်ား)ကို Shift key နဲ႔ သံုးနိုင္ျခင္း ၊ တစ္ေခ်ာင္းငင္ ၊ႏွစ္ေခ်ာင္းငင္ အတိုနဲ႔ အရွည္ေတြကို ( ု၊ူ) (ဳ၊ဴ) Shift key ကို သံုးေနစရာမလိုပဲ တြဲသံုးရမယ့္ အကၡရာ အလိုက္ အစဥ္ေျပေအာင္ ဖန္တီးေပးထားျခင္း. ၊ (ျ - ၊ ၾ -- ) တို႕ကို key တစ္မ်ိဳးတည္း အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း ၊ ေနာက္ျပီး ယခု လက္ရွိမွာ ေဇာ္ဂ်ီတို႕ဘာတို႕မွာ ျမန္မာလက္ႏွိပ္စက္ ေတြ အတိုင္း ရိုက္ရတဲ႔ စာလံုးေတြ ကို တကယ့္ စာေရးတဲ႔အတိုင္း အသံထြက္ျပီးေရးလို႕ရေအာင္ ဖန္တီးထားျခင္းတို႔ စသည့္ စသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိေနပါျပီ ..။
အျခားေသာ အားသာခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္.. ေလာေလာဆယ္ Win font ေတြနဲ႔ပဲ ယွဥ္ျပီး စဥ္းစားၾကည့္ရင္ အလြယ္သိနိုင္ပါတယ္။ ခုေတာ့ ယူနီကုဒ္ Version 5.2 စံ စနစ္အရ Code range (Hexadecimal)U + 1000 "က" အကၡရာ ကေန 109F ရွမ္းသေကၤတ(အကၡရာ ၍ နဲ႔ဆင္တူေသာ) အထိ သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္..။ ျမန္မာဘာသာအျပင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာ စကားေတြလည္း ထည့္သြင္းထားပါတယ္.။ 
" Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above" ဆိုတဲ႔ စာေၾကာင္းေလးကို အမွန္ျခစ္ေပးပါ။
ဒီနေရာမှာ ဘယ် ဖောင့်တွေက ယူနီကုဒ် စနစ်ကို လိုက်နာတယ်ဆိုတာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ ဧရာတို့ ဘာကြောင့် ယူနီကုဒ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီေနရာကေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီကေန ျမန္မာ၃ ကိုေျပာင္းေပးတဲ႔ Converter ပါ... ေျပာင္းတာေတြက ၉၀% ေက်ာ္မွန္တယ္လုိ႕ဆုိပါတယ္.. ေတာ္ေတာ္ေလးလည္း အဆင္ေျပပါတယ္... သံုးၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။
အထက္ပါေရးသားခ်က္မ်ားနဲ႔ ပက္သက္လို႕ မွားယြင္းေနသည္မ်ား ရွိပါက ကြန္းမန္႕တြင္ ျပန္လည္ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။ ေရးသားထားသည္မ်ားကို နားမလည္ မရွင္းလင္းသည္မ်ားရွိက လည္း ကြန္းမန္႕မွာ ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။.. ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမႈမဟုတ္ပဲ ဖတ္မိသမွ်ကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ျခင္း သက္သက္ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ အမွားအယြင္းမ်ား ပါရွိပါက သည္းခံၾကပါရန္နွင့္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးေပးနိုင္ၾကပါရန္ ဆႏၵျပဳပါတယ္။
ဖြစ်နိုင်ရင် ကွန်းမန့်တွေမှာ Myanmar3 ကိုသုံးပြီး ပေးကြည့်စေချင်ပါတယ် :)
(မွတ္ခ်က္ ။ ။ unicode နွင့္ Font ကို ကြဲျပားစြာ နားလည္ဖို႕လိုပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ Myanmar3, Padauk-Zawgyi, WinuniInnWa ... စသျဖင့္တို႕သည္ Unicode 5.2 စံ စနစ္ကို လုိက္နာေသာ font မ်ား ျဖစ္သည္ဟု နားလည္ရမည့္ျဖစ္ပါသည္။)
(2) One Click Unicode Installer !!
Download Myanmar Unicode and Keyboard (Portable)
ဒီစာကေတာ့ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ရိုက္ထားတာပါ။.. ျမန္မာ၃ ကို သြင္းလို႕ အဆင္မေျပတဲ႔ လူေတြအတြက္ ျမင္ေနရေအာင္ပါ။ အထက္ပါ နည္းလမ္း ၂ ခုမွာ Installer ကို အသံုးျပဳတာ ပိုျပီးအဆင္ေျပပါလိ္မ့္မယ္.. Portable ကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ အင္တာနက္ဆိုင္ေတြမွာ အသံုးျပဳရတဲ႔သူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ပါ.. တစ္ခ်ိဳ႕အင္တာနက္ဆိုင္ေတြက ယူနီကုဒ္ကို မသြင္းေပးၾကဘူးဆိုရင္ Portable ေလးနဲ႔ အဆင္ေျပတာေပါ့.. ။ မိမိရဲ႕ Flash Drive ေလးထဲကို ၂ မ်ိဳးစလံုး ထည့္သြားပါ.. သြားေလရာ ဆိုင္မွာ ၾကံဳရင္ ၾကံဳသလို အင္စေတာလုပ္ေပးခဲ႔ၾကပါ.. ။ Deep freeze တင္ထားတဲ႔ စက္ေတြဆိုရင္ေတာ့ အသံုးျပဳတိုင္း ျပန္ျပန္ထည့္ေနရမယ္နဲ႔တူပါတယ္.. ။ ဒါေၾကာင့္ Portable ေလးကို ေဆာင္ထားေတာ့ ပိုေကာင္းတာေပါ့..
လက္ရွိမွာ ျမန္မာ၃ကို စက္ထဲသြင္းျပီးတဲ႔လူေတြက ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္နဲ႔ ေရးထားတဲ႔ ကြန္းမန္႕ေတြ နဲ႔ ယခင္က ပိုစ့္အေဟာင္းေတြ ကို ဖတ္လို႕မရေတာ့ပါဘူး.. ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ကြန္းမန္႕ ေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္လည္း ျမန္မာ၃ ရွိတဲ႔လူေတြပါ ျမင္ရေအာင္ ေအာက္က ကုဒ္ကို HTML editor ကေန ထည့္သြင္းျပီး ကြန္းမန္႕ေပးနိုင္ပါတယ္။
<div style="font-family: Zawgyi-One; font-size: 13px; font-weight: lighter;">
အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ျမန္မာ၃ နဲ႔ ပဲ ၾကိဳးစားျပီး ကြန္းမန္႕ေပးၾကပါလို႕ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းရို္းရိုးပဲ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ေရးေနရင္ေတာ့ ျမန္မာ၃ ကို သြင္းထားတဲ႔လူေတြအေနနဲ႔ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္ေတြကို ဖတ္လို႕အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ပါဘူး..
ေနာက္တစ္ခုေျပာစရာရွိတာက ကီးမက္ဂ်စ္ကို သံုးတဲ႔ေနရာမွာ Installer ကိုသံုးမယ္ဆိုရင္ ေဇာ္ဂ်ီယူနီကိုေရြးလိုက္တာနဲ႔ ယူနီကုဒ္ကို ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္အတိုင္း ရိုက္လို႕ရေနပါမယ္.။
အဲဒါမွ အားမရေသးဘူးဆိုရင္လည္း ေဇာ္ဂ်ီလက္ကြက္အတိုင္း ေရးလို႕ရတဲ႔ NHM Software ကို ယခင္ပိုစ့္ရဲ႕နည္းလမ္း(၃) မွာ မိတ္ဆက္ေပးျပီးပါျပီ။။။
Portable ကိုသံုးရင္ေတာ့ ေဖာင့္ ၆ မ်ိဳးပါျပီး ျမန္မာ၃ကို လည္း သူ႕မူရင္းလက္ကြက္အတိုင္း ရိုက္လို႕ရပါလိမ့္မယ္..
Installer ကိုအသုံးျပဳသူမ်ားက ျမန္မာ၃ လက္ကြက္ အမွန္အတိုင္းရိုက္ခ်င္ရင္ေအာက္က ညႊန္ၾကားခ်က္ေလးမ်ား အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါ..
၁။ KeyMagic Installer ေရာ Portable ေရာ ၂ ခုစလံုးကို ေဒါင္းလုဒ္ယူပါ။
၂။ KeyMagic Installer ကို Install လုပ္ပါ။
၃။ Taskbar မွာ ရွိတဲ႔ system tray ထဲမွာ Key Magic icon ေလး ေပၚလာရင္ Right click ႏွိပ္ပါ ၊ Manage Keyboards ကိုေရြးပါ။
၄။ Add ဆိုတဲ႔ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။(မႏွိပ္ခင္ KeyMagic-1.3.2-Win32-Standalone.zip ကို ျဖည္ထားပါ)
၅။ Keyboard file ကိုေရြးခိုင္းတာနဲ႔ KeyMagic-1.3.2-Win32-Standalone folder ထဲကိုသြားပါ ။ Keyboards folder ထဲကိုထပ္သြားပါ။ အဲဒိထဲက Myanmar3.km2 ကိုေရြးေပးလိုက္ပါ။
(အျခား ပုရပိုဒ္ ၊ ဧရာ ကီးဘုတ္မ်ားကိုလည္း ရိုက္ခ်င္ပါက ထည့္သြင္းထားနိုင္ပါသည္။)
၆။ Hotkey ေနရာမွာ Mouse ကိုေထာက္ျပီး မိမိေျပာင္းခ်င္တဲ႔ ကီးကို ကီးဘုတ္မွ ႏွိပ္ျပီးထည့္ပါ။ (ဥပမာ - Ctrl + Shift + M) ျပီးရင္ Apply .. OK ကိုႏွိပ္ပါ..။
၇။ျပီးရင္ ခုနက Myanmar3.km2 ဆိုတဲ႔ keyboard file ေလးကို Copy ျပီး C:\_Program Files\_KeyMagic\_Keyboards ထဲကို သြားျပီး Paste လုပ္ေပးလိုက္ပါ။.. (ဒီအဆင့္ကို မလုပ္မိရင္ ကီးဘုတ္ေျပာင္း ရိုက္လည္း ျမန္မာ၃ေဖာင့္ အလုပ္လုပ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး)
ဒါဆိုရင္ ျမန္မာ၃ လက္ကြက္အမွန္အတိုင္းရိုက္လို႕ရပါလိမ့္မယ္.. ျမန္မာ၃ ကီးဘုတ္လက္ကြက္ အမွန္ကို ေအာက္က ပံုမွာ ၾကည့္ပါ.. သင့္စက္ထဲကိုလည္း ကူးထည့္ထားပါ။
အဲဒါနဲ႔မွ ေရးလို႕မတတ္ေသးဘူးဆိုရင္လည္း Online Converter ကေန တဆင့္ ေဇာ္ဂ်ီနဲ႔ ေရးျပီး ျမန္မာ၃ ကိုေျပာင္းျပီးမွ ကြန္းမန္႕ေတြ ပိုစ့္ေတြ ေရးေစခ်င္ပါတယ္.. ဒီလိုေလးေတြ လိုက္နာေပးရင္ ေနာက္ပိုင္း ဆိုဒ္တစ္ခုလံုး ယူနီကုဒ္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ေပးမႈအတြက္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ခင္မ်ား..
(၃) အသင္း၀င္မ်ား ခင္မ်ား..
ယခု လက္ရွိမွာ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ႔ျပႆနာကေတာ့ ယူနီကုဒ္ကို မျမင္ၾကရျခင္းပါပဲ.. သို႕မဟုတ္ ရိုက္လို႕မရၾကျခင္းပါပဲ..
ဒီေနရာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္တာကို အခ်ိဳ႕ေသာ အသင္း၀င္မ်ားအေနနဲ႔ အဆင္မေျပၾကဘူးလို႕ ေျပာၾကပါတယ္.. က်ေနာ္ေရးထားတာပဲ နားမလည္လို႕လားလို႕လည္း သံသယ၀င္မိပါတယ္..
လတ္တေလာ စဥ္းစားမိသေလာက္ ရွာလို႕ရတဲ႔အေျဖကို ရွင္းျပေပးခ်င္ပါတယ္..
ယူနီကုဒ္ကို Install လုပ္တာနဲ႔ပက္သက္လို႕ ယခင္ပိုစ့္ရဲ႕ နည္းလမ္း(၁)မွာေျပာခဲ႔သလိုပါပဲဒီေနရာမွာေဖာင့္ကို ေဒါင္းလုဒ္ယူပါ။ ျပီးရင္ control panel ထဲက Fonts ဆိုတဲ႔ ဖိုဒါထဲ ကို ထည့္ပါ..(ဒါေတာ့လုပ္တတ္မယ္ထင္ပါတယ္)
ျပီးရင္..Ekaya(အကၡရာ) keyboard installer ကို Install လုပ္ပါ။ အင္စေတာလုပ္ရာမွာ အလွ်င္မလိုမိဖို႕ အေရးၾကီးပါတယ္.. ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအဆင္မေျပၾကဘူးဆိုတာ အဲဒါေၾကာင့္ပါ.. အရမ္းကာေရာ Next ကို စြတ္ႏွိပ္ေနရင္ေတာ့ လိုရာေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး.. . အကၡရာကီးဘုတ္ကို အင္စေတာလုပ္တဲ႔အခ်ိန္မွာ ေအာက္က ပံုမွာျပထားသလို ျမန္မာ၃ ေဖာင့္ကို ေရြးေပးဖို႕ လိုပါလိမ့္မယ္.. အဲလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ပါဘူး..
သင့္စက္ထဲမွာ (Control Panel ထဲက Fonts folder ထဲမွာ) Myanmar3 ရွိေနျပီဆိုတာ နဲ့ Myanmar3 နဲ႔ေရးထားတဲ႔ ဆိုဒ္ေတြကို သင္ဖတ္လို႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္.. ရိုက္လို႕ရဖို႕အတြက္ပဲ Keyboard installer ေတြကိုအသံုးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္.။ ဒီေလာက္ဆို အဆင္ေျပေလာက္ျပီထင္ပါတယ္..
ဒီစာကို သင်မြင်ရပြီလား။။ ဒါဟာ မြန်မာ ၃ နဲ့ ရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.။ ယခင်က ဇော်ဂျီဖောင့်စသုံးတုန်းက ဒီလိုပဲ ကျနော်တို့အားလုံး ကသောင်းကနင်းဖြစ်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ယခုလည်း ဒီသဘောတရားပါပဲ။..နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာကို ကျနော်တို့ လစ်လျူရှုထားလို့မရပါဘူး.. ကျနော်တို့ အိုင်တီလောက က လူတွေက အသစ်အဆန်းနောက်ကို မလိုက်ရင် တခြားလူတွေက ပိုပြီး အလွန့်အလွန်ကိုနောက်ကျ ကျန်နေခဲ့ကြမှာပါ.. ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေကို မသုံးပဲ ဒီအဟောင်းလေးပဲ ကောင်းပါတယ်ကွာ ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ကွန်ပြူတာတွေ update လုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး.. :)
တစ်ချို့က ပြောကြတယ်.. အင်တာနက်ဆိုင်တွေက မြန်မာ၃ ကိုမသုံးဘူးတဲ့.. စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး.. ယူနီကုဒ်တွေ သုံးလာတဲ့အချိန်မှာ အဲဒိအင်တာနက်ဆိုင် လူဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး..ဒါပေမယ့် အင်တာနက်ဆိုင်မှအသုံးပြုရတဲ့ လူတွေအတွက်ကတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး.. အဲဒိအတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် အင်တာနက်ဆိုင် အက်ဒမင်ကို ခေါ်ပြောပါ.. ယူနီကုဒ်ကို အင်စတောလုပ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းပါ.. လက်ရှိမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာအိုင်တီဆိုဒ်တစ်ခုတည်း ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုတာမဟုတ်ပါဘူး.. သူများဆိုက်တွေသုံးလို့ အံတိုနေကြတဲ့အချိန်မှသာ ကျနော်တို့ စတင်ပြောင်းလဲကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. တော်တော်တောင် နောက်ကျနေပါပြီ.. ဒါတောင်.. မပြောင်းခင် ကြိုတင်ပြီး ဇန္နဝါရီလ ၁၅ မှာ ပြောင်းမယ်လို့ ကြိုတင် ကြေငြာထားခဲ့ပါတယ်.. အသင်း၀င်များအနေနဲ့ အမှတ်တမဲ့ ပဲလား သတိမမူမိကြတာလားတော့မသိပါဘူး. လတ်တလောမှာ အသင်း၀င်များအနေနဲ့ ဆိုက်ရဲ့ Content တွေကို မြန်မာ၃ ရှိမှသာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. နောက်ပြီး. ကွန်းမန့်ပေးရာမှာလည်း မြန်မာ၃ နဲ့ ပေးမှသာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်. . ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုလုံးကို ဇော်ဂျီကနေ မြန်မာ၃ ကိုပြောင်းဖို့အတွက် အချိန်တော်တော်ယူရပါဦးမယ်... လတ်တလော (နောက်ပိုင်းဆွေးနွေးချက်များ) မှစလို့ မြန်မာ၃ကို ပဲ ပြောင်းလဲ သုံးစွဲပေးကြဖို့ပြောချင်သလို .. ယခင်ရှိပြီးသား ဆွေးနွေးရေးသားချက်များကိုလည်း ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် ပြောင်းလဲပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဇော်ဂျီလက်ကွက်ကို လက်မလွှတ်ချင်သူများအတွက်လည်း ယခင်ပိုစ့်မှာ နည်းလမ်း(၂) နဲ့ ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်.. အသင်း၀င်များအနေနဲ့ သေချာ မဖတ်မိတာများလား.... ဂရုတစိုက်ဖတ်စေချင်ပါတယ်ခင်များ.. ဒါမှသာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဆိုလိုချက်ကို တစ်ယောက်က နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
လတ်တလော အခြေအနေမှာ အသင်း၀င်များအနေနဲ့ ယခင်က ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်တွေ reply တွေကို ဇောက်ထိုးတွေ မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒီအတွက်ဖြေရှင်းနည်းကတော့ (အလွယ်နည်း) Note pad​ လေးတစ်ခုဖွင့်လိုက်ပါ.. ဖောင့်ကို ဇော်ဂျီပေးထားပြီး ဒီဆိုက်က ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့စာတွေကို ကူးထည့်ပြီးဖတ်ပါ..(ယာယီပေါ့) နောက်ပိုင်းမှာ အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်..
ကျနော်တို့အနေနဲ့ အသင်း၀င်များဆီကနေ ပြန်ပြီ အကူအညီတောင်းလိုတာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်..
ဘာလဲဆိုတော့ လက်ရှိ ပိုစ့်တင်နေတဲ့လူတွေ (ဘလော့ရေးသူများပါ ပါ၀င်သည်) အနေနဲ့ မိမိတို့ရေးသားထားသည်များကို ပြန်ပြီး မြန်မာ၃ သို့ ပြောင်းပေးဖို့ပါပဲ ..ဒီနေရာလေးမှာ converter လေးရှိပါတယ်.. ဇော်ဂျီကနေ မြန်မာ၃ ကို ပြောင်းလို့ရပါတယ်.. အဲဒါလေးကို အသုံးပြုပြီး မိမိတို့ရေးသားထားတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေကို ပြောင်းပေးမယ်ဆိုရင် တခြားလေ့လာသူတွေအတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်.ကျနော်တို့ အက်ဒမင်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့ ရှိသမျှ ပိုစ့်တွေအကုန် လိုက်ပြောင်းလို့တော့ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လနဲ့ချီပြီးကြာသွားမှာစိုးတဲ့အတွက် .. ခုလို အကူအညီတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်. (ဖြစ်နိုင်ရင် ဝိုင်း၀န်းကူညီစေလိုပါတယ်)
နောက်တစ်ခု မဆီမဆိုင်ပြောချင်တာကတော့ ဆိုဒ်ရဲ့ ဒီဇိုင်းကိစ္စပါ.. ဆိုဒ်ရဲ့ ဘန်နာ ကို ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်.. ကျနော်တို့ရဲ့ မဟာဒီဇိုင်နာကြီး ကိုဒီပ က ခရီရေတာကြီးနဲ့အတူ ထိုင်းကို ခေတ္တသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မအားတော့ ဒီဇိုင်းအသစ်မဆွဲနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်.. ကျနော်ကလည်း ပန်းချီမျက်စိမရှိတော့ အရင်တခါ ၁၀၁၀၁၀ နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဘန်နာက မလှလို့ ပြန်ဖြုတ်လိုက်ရပါတယ်.. ဒါကြောင့် အသင်း၀င်များအနေနဲ့ ဘန်နာကို Suggestion အနေနဲ့ ဆွဲပေးမယ်ဆိုရင်လည်း စိတ်မဆိုးပါဘူး.. အဲဒိကိစ္စအတွက် ပိုစ့်တစ်ခု သတ်သတ်ရေးပြီး တင်ပါ့မယ် .
ကျနော်သည်လည်း မြန်မာတစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ ပိုခက်သည်။
တစ်ချိန်ကသာ မြန်မာတွေက ကွန်ပြူတာဆိုတာကို စတင်တီထွင်နိုင်ခဲ့ကြလျှင် လက်ရှိအချိန် အခြား နိုင်ငံများသည် မြန်မာစာကို အသုံးပြု၍ သူတို့ ဘာသာစကားကို အသံထွက်နေကြရပေလိမ့်မည်။ ဥပမာ - ဟောင်းအာယူ. .. အိုင်အမ်ဖိုင်း သန့်ခ်စ် .. အာယူအိုကေ.. အိုလက်ဖ်ယူ ... အိုင်မစ်စ်ယူ.. ဝေါ်အိုက်နီ(တရုတ်) .. အိုက်ရှိသဲရို(ဂျပန်).. ဆာရာငယ်(ကိုရီးယား) .. အိရှ်လိဗယ်ဒစ်ရှ် (ဂျာမန်) .. ရာလူဗလူးကျည်ဗျာ(ရုရှား) စသဖြင့်ပြောဆိုကြရပေလိမ့်မည်။ ..
ယခုတော့ ထိုအမြင်နှင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်မှာ သင့်အနေဖြင့်စောတက တက်ဖွယ်မရှိ.. နေရာအတော်များများတွင် ဘားဂလိရှ်ဖြင့် သာ.....မြန်မာ့နည်းပညာတိုးတက်မှုတွေကိုလေ့လာဖို့ သမိုင်းကိုပြန်လှန်လျှင် ကနောင်မင်းသားကြီး၏ နည်းပညာစီးကြောင်းကို ရပ်တန့်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြခြင်းသည် သမိုင်း၏အဓိကတရားခံ အကြောင်းအရာများဟု စွပ်စွဲကြရပေလိမ့်မည်.။ . ထားတော့ သမိုင်းများ.. ဆက်လှန်လျှင် အသုံးမကျသည်များ တသီတတန်းကြီး ထွက်ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။
ဆိုလိုချင်သည်က... လက်ရှိတွင်လည်း မိမိတို့အနေဖြင့် .. မြန်မာစာကို ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ စတင်အသုံးပြုလာချိန်မှစ၍ လက်ရှိအချိန်အထိ အဆင်မပြေမှုများ ရှိနေဆဲပင်.. ထိုအဆင်မပြေမှုများသည် ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရပါသနည်း ဟု မေးခွန်းတွေမေးကြည့်စေချင်သည်.. ကိုယ်တိုင်လည်း ဖြေကြည့်စေချင်သည်.. ကျနော့်အမြင်များကို ဒီနေရာမှာ ဆွေးနွေးကြည့်ချင်သည်.. .. မကိုက်ညီသည့်သဘောထားများရှိကလည်း ဝေဖန်အပြစ်တင်နိုင်သည်။..စရမည်ဆိုလျှင် လူမျိုးက စ ရပေလိမ့်မည်.. ကျနော်တို့ သူများနိုင်ငံများထက် များစွာခေတ်နောက်ကျနေခဲ့သည်...
မြန်မာလူမျိုးများသည် သဘောကောင်းကြသည်၊ ဖော်ရွေကြသည်.. ၊ ရိုင်းပင်းကူညီကြသည်..၊ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်ကြသည်။... စ ပါပြီ.. အဲဒိမှာ .. တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်း...ကျနော့်ရဲ့ အမြင်တစ်ခုက ဘာသာတရားကို ဆန့်ကျင်နေပါသလား. . ကျနော်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ပညာရပ်များကို လေ့လာရာတွင် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်းမရှိ ဖြစ်နေခဲ့သည်... ။
ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ ပညာ ကို ကွဲလွဲစွာ နားလည်တတ်ဖို့လိုပါသည်.။ လက်ရှိမှာ မြန်မာတွေကတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်ဟု ကျနော်ထင်သည်.. ပစ္စည်းဥစ္စာကို တပ်မက်ပြီး အသိ/အတတ်ပညာတို့ကို တင်းတိမ်ရောင့်ရဲနေပေသည်.။ ထူးဆန်းလေစွ .... ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်များ၏ တလွဲ အယူဝါဒများလား....
ကျနော်ဆိုလိုချင်သည်က လက်ရှိတွင် မြန်မာအိုင်တီဆိုဒ်က ယူနီကုဒ်စံ စနစ်ကို အသုံးပြုပြီဟု ကြိုတင်ကြေငြာပြီးနောက် ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်.. သို့သော် အချို့သော သူများက ရှိရင်စွဲနှင့်ပင် နေချင်ကြသည်.. တစ်ချို့ကျတော့လည်း အလုပ်ရှုပ်တယ် .. ဖတ်ရတာ နားမလည်ဘူးဟု အကြောင်းပြ၍ ဘာမှမလုပ်ပဲနေကြသည်... တစ်ချို့ကျတော့ စာကို သေချာမဖတ်ပဲ အဆင်မပြေဘူး ဟု ငြင်းကြသည်.. တစ်ချို့ကတော့ တကယ် အခက်အခဲများရှိ၍မေးကြသည်.. တစ်ချို့ကတော့ နည်းပညာစီးကြောင်းအတိုင်းအဆင်ပြေစွာ စီးမျောနိုင်ကြသည်... ဒီလိုအခြေအနေတွေအားလုံး သည် မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပေလိမ့်မည်... ကျနော်တို့သည် တိုးတက်မှုဆီသို့ သွားမှ တိုးတက်ခြင်းရဲ့ ရလာဒ်ကို ခံစားရပေလိမ့်မည်.. . တိုးတက်မှုကတော့ ကျနော်တို့ ဆီ လာပြီး တိုးတက်ဖို့ လာလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ကို သတိချပ်စေချင်သည်...
အထက်ပါအချက်များသည် မြန်မာဖောင့်အသုံးပြုခြင်း၏ အဆင်မပြေမှု တစ်ပိုင်းတစ်စများပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်... ထို့အပြင် တီထွင်သူများအနေ ဖြင့်လည်း တစ်မျိုးတည်းသော တစ်ခုတည်းသော စံစနစ်ကို လိုက်နာထားတာချင်း အတူတူ အက္ခရာ ၊ ကီးမန်း ၊ ကီးမက်ဂျစ် စသဖြင့် တစ်ယောက်တစ်မျိုးဖြစ်နေမည့်အစား Standard ကျကျ တစ်ခုဆို တစ်ခုတည်း Install လိုက်ရုံဖြင့်အဆင်ပြေသည့်အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်ပေသည်.. အခုတော့ ယူနီကုဒ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ နည်းလမ်းတွေကို စုံလို့... သူတစ်လူ ငါတစ်မင်း တီထွင်နေကြတာလားတော့ မသိ.. လေးစားပါ၏။....
ကျနော်တို့ ၀င်းဖောင့်များ စတင်သုံးစွဲခဲ့ချိန်က မြန်မာစာကို ကွန်ပြူတာမှာ ရိုက်လို့ရနေသဖြင့်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြဖူးသည်.. သို့သော် ပြဿနာများ များစွာ ရှိခြင်းကြောင့်စိတ်ညစ်ခဲ့ကြဖူးပေလိမ့်မည်.. .
ထိုနည်းတူ ဇော်ဂျီကဲ့သို့ ယူနီကုဒ်ပွိုင့်များကို အသုံးပြုထားသော ဖောင့်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်အင်တာနက်တွင်ပင် မြန်မာဖောင့်နှင့်စာများကို ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့ကြသည်မှာ.. ၀မ်းမြောက်စရာပင်... သို့သော် ယူနီကုဒ်ဆိုသော စည်းမျဉ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာများ မှ တီထွင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့် တစ်ကြောင်း ... ယူနီကုဒ် စံစနစ်ကို လိုက်နာသော ဖောင့်ကိုသာ ယူနီကုဒ်ဖောင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသောကြောင့်တစ်ကြောင်း.. ဇော်ဂျီ ကဲ့သို့သောဖောင့်များသည် ယူနီကုဒ်အတုအယောင်များ ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့ကြရပေသည်...
သို့သော်လည်း မြန်မာတွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်ယူနီကုဒ်စံစနစ်ကို လိုက်နာသော မြန်မာစာဖောင့်များ .. လက်ရှိအခြေအနေတွင် ... ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပေသည်.. .... ထိုကဲ့သို့ထွက်ပေါ်လာသော ဖောင့်များကို ကျနော်တို့ မသုံးပဲနေလျှင် ကျနော်တို့အနေဖြင့် ကွန်ပြူတာများကို ဆက်လက်အသုံးပြုရန် မသင့်တော့ပေ... ဘာကြောင့်လဲ..????
သင့်အနေဖြင့်မြန်မာ မဟုတ်လျှင် .. မြန်မာစာ မြန်မာစကားကို အလေးထားစရာမလို ..ကိစ္စမရှိ ... English version အတိုင်း သင့်အတွက် အဆင်ပြေပေလိမ့်မည်.. .. ကျွန်ုပ်အနေနဲ့တော့ မြန်မာစာကို အလေးထားသည်.. မြန်မာစာသုံး ကွန်ပြူတာ စနစ်တခုကို ပေါ်ထွက်စေချင်သည်.. အားလုံးကို မြန်မာမှုပြုချင်သည်.. ( Localization ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်အောင် လေ့လာကြည့်လျှင် ဘာသာပြန်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော တိုးတက်မှုများကို နားလည်ပေလိမ့်မည်)
လက်ရှိတွင် တစ်ဖွဲ့က ဇော်ဂျီ.. တစ်ဖွဲ့က ယူနီကုဒ်.. ( အစကတည်းက မြန်မာတွေ ၃ ယောက်ရှိရင် ၂ ဖွဲ့ကွဲနေကြတာ) .. လုပ်နေကြရင်တော့ စာတွေ ဖတ်မရပဲ Myanmar's Information System ကြီး ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်တော့မည်.. သင်တို့ပြောတော့ လက်ရှိမှာ IT era (Information Technology) ခေတ်. တကယ်တန်း လိုက်နာနေကြတာက ITC era( Information Technology Contentment) ရှိတဲ့ IT နည်းပညာလေးတွေနဲ့ အားရကျေနပ်နေကြတဲ့ ခေတ်... စိတ်ဆိုးလည်း ဆိုး မြန်မာအချင်းချင်း နှိပ်ကွပ်တာ နိုင်ငံခြားသား မသိ.. ပြန်တော့ မပြောကြနဲ့ပေါ့.. ဟတ်ဟတ် (Dr.Ox ရယ်သံ)
ကျနော်တို့ စူးစမ်းဖို့.. လေ့လာဖို့.. အသုံးချတတ်ဖို့ အများကြီး လိုအပ်နေပါသေးသည်... တစ်ချို့ကတော့ အစိုးရမကောင်းလို့ လက်ညှိုးညွှန်ပေလိမ့်မည်.. .. တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ဆိုင်ပေလိမ့်မည် .. သို့သော် .. ကျနော်ကတော့ မိမိကိုယ်ကိုယ် လက်ညှိုး ညွှန်ပါသည်..ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပင်.... မိမိကိုယ်တိုင်မှ မသိရင် အစိုးရက လည်း ဘာမှ လုပ်မပေးနိုင်ပါ.. .. မိမိဘ၀ မိမိ အသိကို မိမိကိုယ်တိုင်သာ တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပေလိမ့်မည်... ဘာသာတရားအရ ဆိုလျှင် မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာပင်... သို့သော်လည်း တလွဲဆံပင် ကောင်းခြင်းများတော့ ရှောင်အပ်ပေသည်... .။
ကျနော်တို့ ညီညွတ်ကြရအောင်လား.... ..(ဆန္ဒဖြစ်သည်...)
တစ်ချို့က ကိုယ့်လူမျိုးချင်းတောင် အလေးမထား.. ..သင့်ကိုယ်သင် မြန်မာလို့ခံယူနေသရွေ့ မြန်မာတစ်ယောက်ရဲ့ သဘောကောင်းခြင်း.၊ ဖော်ရွေခြင်း ၊ ရိုင်းပင်းကူညီခြင်း ၊ စသည်များဖြင့် သင့်ရဲ့ ပတ်၀န်းကျင်ကိုဖြည့်ဆည်းသင့်ပေသည်.။သင်ကိုယ်တိုင် မလစ်လပ်အောင် လေ့လာပါ။ သိသမျှကိုလည်း မျှဝေပါ.. .. မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ ဆရာစားချန်တဲ့ သောက်တလွဲ အတွေးအခေါ်ကို ဖျောက်ပါ.. .. ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း သိသမျှ မချွင်းမချန် မျှဝေနေခဲ့ပါသည်... သင်တို့လည်း အတ္တဟိတ ထက် ပရဟိတ ကို ဦးစာပေးစေချင်ပါသည်.. (စိတ်ဓါတ်ရှိသရွေ့ပေါ့).. စိတ်ဓါတ်ရေးရာကတော့ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်သာဆိုင်ပေသည်...
ကျနော်တို့ (Myanmar IT Development) အနေဖြင့်ယူနီကုဒ်ကိုသာ ဆက်လက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် အသင်း၀င်များအနေဖြင့်လည်း လိုအပ်သည်များကို ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.. .. ပါးစပ်ထဲ မခွံ့ရုံတမယ် ထမင်းပွဲကိုတော့ သင့်အနေဖြင့်ငြင်းဆိုရန် မသင့်ပေ... ။ ကျနော်တို့ကတော့ ရှေ့ကို ဆက်သွားမည်.. သင့်အနေဖြင့် လမ်းမှာ ကျန်ခဲ့ချင်လည်း ကျန်ခဲ့နိုင်သည်...သင့်သဘောသာဖြစ်သည်.. ။ (သင့်လို ကျန်နေခဲ့တဲ့လူတွေ များနေလို့ နိုင်ငံကြီး မတိုးတက်ဘူးလို့တော့ ဘယ်တော့မှ လက်ညှိုးမထိုးပါနဲ့သင်တကြောင့် မတိုးတက်တာလို့ပဲ သင်တို့ခံယူကြပါ... )
Posted in: Myanmar Unicode
ျမန္မာ ယူနီကုတ္ Myanmar3 Unicode Installation Meth...
Mobile‬ မိ်ဳးစံုအတြက္ Firmware ေရးသားနည္း(ရဲမင္းေအ...